🥇 ▷ Samsung Galaxy A10s, muuqaalada iyo qiimaha ✅
Samsung Galaxy A10s, muuqaalada iyo qiimaha
IFA-da ee Berlin waxay umuuqataa inaysan u jirin Samsung. Samsung Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note 10+ ayaa la bilaabay isbuucyo yar ka hor iyaga oo ah soojeedin cusub oo loogu talagalay tirada sare. Maalmo kadib, si ka soo horjeedda. Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigeysa Samsung Galaxy A10s, mid ka mid ah terminals-ka raqiiska ah ee taxanaha Galaxy A, kana kooban moodooyin badan. Astaamaha iyo qiimaha mobiladan cusub.
Samsung Galaxy A10s wuxuu la imanayaa shaashad LCD 6.2 inji ah iyo HD + xallin, iyo sidoo kale qaab shaashad ah oo ah 16.5: 9, inyar in ka badan sidii caadiga ahayd, laakiin la jaan qaadi kara One UI ee ka hooseeya Android 9.0 Pie iyo codsiyada intooda badan oo aan ka heli karno Nidaamka Google, Android. Shaashadda ayaa u mahadcelinaysa batteriga 4,000 mAh. Iyadoo la tixgalinayo qaraarka, waxaan filan karnaa muddo aad u dheer oo xitaa labo maalmood ah oo leh adeeg dhexdhexaad ah. Intaa waxaa sii dheer, One UI waxay sidoo kale ku daraysaa hagaajinta maaraynta is-xukunka, sida hab-dhaqanka habeenkii.
Galaxy A10s wuxuu leeyahay Exynos octa-core processor iyo 2 GB oo RAM ah. Sidoo kale 32 GB oo kaydinta gudaha ah oo ay suuragal tahay in lagu ballaariyo iyaga oo loo adeegsado micro SD illaa 500 500 ka badan. Haddii aan kahadalno kamaradaha, waxaan haysanaa 13 megapixel ugu weyn iyo mid labaad oo leh megapixels 2. Sidoo kale hore 8.
Samsung Galaxy A10s, astaamaha
Cabirka iyo culeyska: 156.9 x 75.8 x 7.8mm iyo 168 garaam
shaashadda: 6.2 ”HD + oo leh 720 × 1520 pixels
Kaydinta: 32 GB + micro SD
Kaameera maamulaha: 13 megapixels f / 1.8 + 2 megapixels
Kaameera hore: 8 megapixels
Durbaan: 4,000 mAh
Isku xirnaanta: WI-FI, 4G, Bluetooth, GPS
Nooca ee Android: Android 9.0 Pie oo leh hal UI ah
Kuwa kale: Akhristaha faraha
Naqshadeynta waxaan ku aragnaa dusha dhalaalaysa ee dhaldhalaalaysa dhabarka iyo sawirka faraha ee xarunta. Ka sokow laba laba kamaradood oo dhinaca ku yaal. Wejiga hore wuxuu leeyahay Nooc Drop Water ah iyo qaanso yar oo loogu dhawaaqi karo salka hoose, laakiin leh curvature geesaha.
Qiimaha Samsung ee Galaxy A10s wali lama shaacin. Qaabkan ayaa la filayaa waxay ku kacday ilaa 200 oo yuuro. Waxaa la bilaabi karaa inta lagu jiro bisha Sebtember.